မတျ 3, 2019 – Healthy Life Journal
ဆီးသွားခါနီးတိုင်း နာတယ်၊ ကျဉ်တယ် . . .
မေး. ဆီးသွားခါနီး ဆီးလမ်းကြောင်းထိပ် အရမ်းနာသလို ကျဉ်သလိုဖြစ်တယ်။ ပထမဆရာဝန်ပြတယ်။ ဆီးပိုးစစ်တော့ pus cells များတယ်လို့ ဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။ ဆေးပေးပြီး သက်သာတယ်။ နောက် ဆီးပိုးမွေးထားတဲ့အဖြေကို ပြန်ပြတော့ သမားတော်ကိုလွှဲတယ်။ သမားတော်က ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဆေးပဲပေးလိုက်တယ်။ အခုတစ်ခါ ဆီးသွားတဲ့အခါ...